Ban Ki-Moon oo shaqada ka eryay taliyaha ciidamada UNMISS - BBC News Somali
Image caption Colaadda Suudaanta Koonfureed ayaa barakicsay kummanaan qof oo rayid ah.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ayaa shaqada ka eryay taliyaha ciidamada nabad ilaalinta ee hawlgalka Qaraamda Midoobey ee Suudaanta Koonfureed ee UNMISS.
Taliyahan ayaa lagu eedeeyay in ciidamada uu hoggaamiyo ay ku guul dareysteen in ay badbaadiyaan dad rayid ah oo lagu soo weeraray xero ay leedahay Qaramada Midoobey bishii Luuliyo ee sanadkan.
Dad ku sugnaa xeradaasi ayaa waxa ay ku eedeeyeen ciidamada Qaramada Midoobey in aysan ka difaacin ciidamada dowladda oo weerar ku soo qaaday xeradaasi oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah.
Ugu yaraan 73 qof ayaa ku dhimatay dagaallo muddo maalmo ah ka socday magaalada Juba ee caasimadda dalkaasi.
Baaritaan ay Qaramada Midoobey ku sameysay dhacdadaasi ayaa lagu ogaaday in dhibaatada ugu weyn ay ahayd hoggaan xumi haysatay ciidamadeeda nabad ilaalinta, arrintaa oo sababtay jahawareer iyo in la difaaci waayo dadka rayidka ah.
Dadka rayidka ah ee dalkaasi ayaa waxaa aad u saameeyay colaadda u dhaxeysa ciidamada dowladda iyo kooxaha fallaagada, waxaana dadka ay dhibaatada ka soo gaartay ka mid ah kuwo ka soo barakacay guryahooda oo soo magan galay xero ay leedahay Qaramda Midoobey.
Ciidamada nabad ilaalinta ayaa lagu eedeynayaa in ay gabeen waajibaadkooda oo ay ka bexeen xeryahooda isla markana ay ku guul dareysteen in ay ka hortagaan bililaqo loo gaystay xarun ay leedahay Qaramada Midoobey.
Shaqaalaha gargaarka ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamadaasi ay sidoo kale diireen in ay u soo birmadaan kaddib markii lagu soo weeraray xarunta ay ku sugnaayeen shaqaalaha caalamiga ee samafalka.
Warbixinta Qaramnada Midoobey ayaa sheegaysa in ciidamadeeda ku sugan dalkaasi Suudaanta Koonfureed aysan la hayn hoggaan mideysan, arrintaa oo keentay jahawareerka.
Ban Ki-Moon waxa uu sheegay in uu aad uga xumaaday waxyaabaha lagu ogaaday baaritaankaasi, waxa uuna isla markiiba dalbaday in la eryo madaxa ciidamadaasi.